घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू डीन हेंडरसन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो डीन हेंडरसन बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो अंग्रेजीको गोलकीपर, डेनोको जीवन कथा हो। Lifebogger आफ्नो बाल्यकाल देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाईंको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, वयस्क ग्यालरीमा उनको बाल्यकाल हेर्नुहोस् - डीन हेंडरसनको बायोको एक सारांश।
डीन हेंडरसन प्रारम्भिक जीवन र महान उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ २०१२/२०२० सत्र पछि उनको द्रुत उग्राइको बारेमा, एक त्यस्तो उपलब्धि जसले उहाँलाई सर्वश्रेष्ठ दावेदार बनायो जोर्डन पिकफोर्डको इ England्ल्यान्ड राष्ट्रिय टीम स्पट। अधिक, एक ठूलो प्रतिद्वन्द्वी डेभिड डी Gea को म्यानचेस्टर युनाइटेड गोलकीपिंग स्पट।
यद्यपि, केवल एक हातले फुटबल प्रेमीहरूले डीन हेंडरसनको जीवनी पढ्ने बारेमा विचार गरेका छन् जुन हामीले तयार गरेका छौं र यो एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
डीन हेंडरसन बचपन कहानी:
सुरू गर्दै, उनका पूरा नामहरू "डीन ब्राडली हेंडरसन“। डीन हेंडरसनको जन्म १२ मार्च १ 12 1997। मा युनाइटेड किंगडमको व्हाइटहेभन शहरमा भएको थियो। बढ्दो इ England्ल्यान्ड गोलकीपर आफ्ना बुबाआमाको दोस्रो छोरा र बच्चाको रूपमा जन्मेका थिए।
डीन हेंडरसनले आफ्नो प्रारम्भिक बचपनका वर्षहरू आफ्ना भाइहरूसँगै बिताए; क्यालम नाम गरेका एल्डर र कलिलोलाई काइल हेन्डरसन भनेर चिनिन्छ। तल तिनीहरूको बाल्यकालका दिनहरूमा डीन हेंडरसन भाइहरूको प्यारा फोटो छ।
डीन हेन्डरसनका भाइहरूसँग भेट्नुहोस् - क्यालम हेन्डरसन (धेरै दायाँ) र काइल हेंडरसन (मध्य) उनीहरू बच्चा भएको समयमा।
डेन हेन्डसनसनs परिवार पृष्ठभूमि र उत्पत्ति:
धनी अभिभावकको साथ वर्तमान र भूतपूर्व फुटबलरहरू भन्दा फरक; फ्रैंक लम्पर्ड, Gerard Pique, मारियो बाल्टोटेल र ह्यूगो लेलोरी, हाम्रो आफ्नै आफ्नै Henderson एक सुपर धनी घरमा हुर्किएको थिएन। सत्य हो, डीन हेंडरसनका अभिभावक सानो शहर व्हाइटहेभनका प्रायः व्यक्तिहरू जस्तो थिए जसले काम गरे, औसत जीवन बिताए र कहिले पनि गरेनन् पैसा संग संघर्ष।
डीन हेंडरसनको परिवार व्हाइटहेभनको हो। यो एउटा बन्दरगाह शहर हो जुन इ England्गल्यान्डको उत्तर पश्चिममा ताल जिल्ला राष्ट्रिय निकटको नजिक कुम्बरियाको पश्चिमी तटमा अवस्थित छ। व्हाइटहेभन मुख्य बन्दरगाह हो, एउटा जसले युकेको रम व्यापारको लागि ठूलो प्रतिष्ठा कमाएको छ।
यो व्हाइटहेवन हो - जहाँ डिन हेंडरसनको परिवार आउँदछ।
फेरि के तपाईंलाई थाहा थियो?… जर्ज वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमेरिका को पहिलो राष्ट्रपति) परिवार जरा ह्वाइटहेवनमा जोडिएको छ। हो! बन्दरगाह शहर उसको बुवाआमाको घर छ मिल्ड्रेड गेल (१ 1671–१-११1701०१) जो त्यहाँ बस्थ्यो र शहरको सेन्ट निकोलस चर्चमा गाडियो।
डीन हेंडरसन बचपन कहानी- शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
Age वर्षको उमेरमा, डीनले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा व्हाइटहेभनमा शुरू गरे। एक स्कूलका साथीका रूपमा उनी खेलकूदसँग ठ्याक्कै प्रेम गर्थे नहीं सुरुमा फुटबल डीन हेंडरसनले क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे, यो त्यस्तो उपलब्धि थियो जसले उनलाई बाल ब्याट्सम्यान र विकेटकीपर बनायो।
थप जान्ने तीव्र इच्छाको साथ, सानो डीन फुटबल गतिविधिहरूमा भाग लिन थाले। अन्तमा, उनी फुटबलको लागि क्रिकेट भन्दा बढी प्रबल थिए। म्यानचेस्टर युनाइटेड प्रशंसकहरू थिए डीन हेंडरसनका अभिभावकले उनीहरूको छोरालाई क्लब समर्थन गर्न सुरु गरे। पछि, संयुक्त को प्रेमले उसलाई युनाइटेड किट्स दिन, दिन बाहिर लगाउन लगायो। तल अवलोकन गरिए अनुसार, किटका दिनहरूमा लगाइएको जस्तो देखिन्छ एरिक कोन्टाना.
हामी तपाईंलाई डीन हेंडरसनको बाल्यकालको फोटोको सब भन्दा चाँडो प्रस्तुत गरेर शुरू गर्दछौं।
डीन हेंडरसन बचपन कहानी- प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
सानो डीनलाई थाहा थियो कि उनीसँग प्रतिभा छ र फुटबलबाट केहि बनाउन सकिन्छ। उमेर3देखि जब उनले संयुक्तलाई समर्थन गर्न शुरू गरे, भविष्यको इ England्ल्यान्ड गोलकीपर सुरु भयो आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा काम गर्दै, प्रिमियर लिगमा खेल्ने सपना देख्दै। प्रारम्भमा, उनले अभ्यासमा आफ्नो सपना राखे।
सन् २०० 8 मा 2005 वर्षको उमेरमा सानो डीनलाई कार्लिसिल युनाइटेडले एकेडेमी परीक्षणको लागि आमन्त्रित गर्यो जुन उनले उडान रंगहरूमा पार गरे। डीन हेंडरसनका अभिभावकहरूले क्लब छनौट गरे किनभने यो उनीहरूको पारिवारिक घरबाट नजिकको सर्वश्रेष्ठ क्लब (लगभग minutes 55 मिनेट) थियो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… सानो हेन्डरसन (तल चित्रमा) सुरुमा आउटफिल्ड खेलाडीको रूपमा फुटबल खेल्न सुरु भयो, तर पछि उसको किशोर बर्ष भन्दा पहिले गोलकीपरमा स्विच भयो।
डीन हेंडरसन- शुरुआती वर्षहरू कार्लिसिल युनाइटेडसँग।
ठूला एकेडेमीहरूमा ट्रायलहरू हुनु आवश्यक परेको थियो जब उनले आफ्नो किशोर-किशोरी बर्षको उमेर पुगेका थिए। डीन हेन्डरसनका अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूको खुसीको सीमा थिएन जुन उनी (उमेर १ 14) मान्चेस्टर युनाइटेड एकेडेमी परीक्षामा पास भए।
डीन हेंडरसन जीवनी- फेम कहानी कहानी:
कार्लिसिल युनाइटेडमा छ वर्ष बिताएपछि हेन्डरसनले म्यानचेस्टरमा १ 135 माईल सर्ने निर्णय गरे जहाँ उनले युनाइटेडको एकेडेमीमा नयाँ जीवन सुरु गरे।
युनाइटेडमा, डीन हेन्डरसनको ड्राइभ र दृढ संकल्प उसको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो। उहाँ जस्तो परिपक्व हुन जारी, उनले आफूलाई एकेडेमीको साथ जीवनमा राम्रोसँग बसोबास गरेको र संयुक्त उमेर समूहहरू मार्फत निर्मम प्रगति गरेको देखे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… डेन हेन्डसनसन जिमी मर्फी २०१––१। का लागि नामित व्यक्तिहरू मध्ये एक जना थिए युवा प्लेयर अफ द ईयर पुरस्कार तर हरायो एक्सेल तुआन्जेबी- मजबूत केन्द्रीय डिफेंडर। अगस्त २०१ 2015 मा, हन्डरसनले क्लबसँग आफ्नो पहिलो व्यावसायिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
एक वरिष्ठ गोलकीपरको रूपमा, उनले कडा प्रतिस्पर्धा भेट्टाए। त्यतिखेर, युनाइटेडका senior जना वरिष्ठ गोलकिपरहरू थिए; डेभिड डी गी, जोएल परेरा, साम जोनस्टोन, सर्जियो रोमेरो र पौराणिक भिक्टर भाल्डेस। डीनलाई सजिलैसँग सran्केत गर्न गाह्रो थियो। प्रगति गर्नका लागि, उसले loanणमा नयाँ चराहरू खोज्ने निर्णय गर्यो।
डेन हेन्डसनसन जीवनी- फेम टू फेम स्टोरी:
तर loanणमा हुँदा चुक्नु भन्दा बरु जवान अंग्रेजी गोलकीपर एक बलबाट अर्को बलियो हुँदै गए किनकि उनले यात्रा गरेर आफ्नो बक्यौता तिरेको थियो। स्टॉकपोर्ट काउन्टी, ग्रिम्स्बी र श्रिजबरी शहर। श्रिजबरी टाउनमा, डीन प्रशंसक मनपर्ने भए किनकि उनले उनीहरूलाई धेरै खेलहरू जित्न मद्दत गरे।
अझै युनाइटेडसँग अवसरको खोजीमा हुँदा डीन हेन्डरसनले अवलोकन गरे डेभिड डी गी अझै आफ्नो शक्तिहरु को चरम मा हुन। उनले कहिल्यै युनाइटेडलाई नत्यागी आफ्नो loanण स्पेल जारी गर्ने निर्णय गरे। जबकि पनी युनाइटेडसँग दुई वर्षको अनुबन्ध विस्तारमा हस्ताक्षर गर्दै, विश्वासी संयुक्त नोकरले theण विकल्पको साथ लिने निर्णय गरे शेफील्ड युनाइटेड
शेफील्ड संयुक्त अन्तर्गत हुँदा क्रिस वाइल्डर, डीन हेंडरसन उसको प्रिमियर लिग नियतिले उनलाई बोलाएको महसुस गर्न सक्छ। सत्य यो हो कि उसले केवल सहयोग गरेन शेफील्डले २०० 2007 पछि पहिलो पटक प्रिमियर लिगमा सुरक्षित पदोन्नति गर्यो। डीन पनि क्लबको युवा प्लेयर अफ द ईयर अवार्ड जित्न सफल भए, साथ साथै च्याम्पियनशिप गोल्डन ग्लोभ।
द्रुत-बढ्दो अंग्रेजी गोलकीपरले च्याम्पियनशिप गोल्डन ग्लोभ जित्यो।
डीन हेन्डरसनको जीवनी witing को समय को रूप मा, युवा गोलकीपर अब प्रिमियर लिग को सबै भन्दा राम्रो फार्म गोलकीपर हो स्ट्यान्डआउट प्रदर्शन को एक मेजबानी को धन्यवाद। उनलाई एक उत्तराधिकारीको रूपमा लेबल गरिएको छ डेभिड डी Gea जो संयुक्तले पहिलो छनौटको रूपमा स्थापना गर्न बिक्रीमा विचार गरिरहेको छ। अधिक, एक प्रतिस्थापन जोर्डन पिकफोर्ड इ England्ल्यान्ड नम्बर १ को रूपमा तर हेन्डरसनको फार्म कसैको नजरमा जान सक्दैन किनकि उसले पिकफोर्डलाई अर्को इ England्ल्यान्ड नम्बर १ मा बदल्ने सम्भावना छ।
२०१२-२०२० को मौसमले उनलाई इ England्ल्यान्ड र विश्‍वको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपरहरूको रूपमा लेबल गरिएको देख्यो।
कुनै श doubt्का बिना, त्यहाँ हन्डरसन भन्दा राम्रो गोलकीपरको रूपमा देखा पर्न सक्ने हर सम्भावना रहेको छ De Gea र पिकफोर्ड कुनै समय मा। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
डीन हेंडरसन को हो? प्रेमिका ?:
उनको प्रसिद्धिमा प्रिमियर लिगमा आफ्नो नाम र नाम कमाउनको साथ, यो निश्चित छ कि केही जिज्ञासु प्रशंसकहरू जान्न चाहन्थे कि डीन हेंडरसनको प्रेमिका को हो। अझ यति सुन्दर गोलकीपर विवाहित छ कि छैन जो एक श्रीमती हुनु पर्छ।
सत्य यो हो, सफल र सुन्दर गोलकीपरको पछाडि, त्यहाँ एक ग्लैमरस प्रेमिका छ जसको परिचय तलको फोटोमा प्रकट भएको छ।
डीन हेंडरसनको प्रेमिकालाई भेट्नुहोस्।
डीन हेंडरसन र उनकी प्रेमिकाले ठोस आधारमा घनिष्ट सम्बन्ध सुरू गरे, जुन सार्वजनिक आँखाको छानबिनबाट बच्दछ। Lovebirds - जसको कुनै छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) विवाहबाट बाहिर छ - ले नोभेम्बर २०१ around को बारेमा सार्वजनिक बनायो।
तल अवलोकन गरिए अनुसार गर्मीको लागि जोडीको मनपर्दो मार्गहरू मध्ये एक स्पेनिश टापु र अन्य सुन्दर युरोपियन समुद्री किनारहरू मध्ये आइबिजाको पानी हो। तल उसको सुन्दर प्रेमिका वा डब्लुएग साथ ट्याटुलेस डीन छ।
डीन हेंडरसन र प्रेमिका डुfriend्गा सवारी लिन्छन्।
डीन हेंडरसनलाई मन पराउनुभयो जब उनले यो प्रेमिकाको साथमा आफैले यस फोटो पोष्ट गरे सार्वजनिक रूपमा भनेका शब्दहरूमा;
“हामी आफ्नो उत्तम जीवन बिताइरहेका छौं”
दुबै प्रेमबर्डहरूले उनीहरूको सम्बन्धलाई कसरी हेरिरहेका छन् भनेर हेक्का राख्दै यो कुरा स्पष्ट छ कि विवाह प्रस्ताव र विवाह सम्भवतः अर्को औपचारिक कदम हुनसक्दछ।
अ goal्ग्रेजी गोलकीपरको व्यक्तित्व चिन्नुले तपाईंलाई पिचबाट बाहिर उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
डीन हेंडरसन को हो?… सुरूवात गर्दै, ऊ त्यस्तो मानिस हो जो सहज र प्रायः आफ्ना आकांक्षाहरूका बारे काल्पनिक हुन्छ। डीन आफ्नो सपनाहरु को लागी छोड्नु को आवश्यकता बाट प्रेरित छ। ऊ सर्वश्रेष्ठ भए जस्तो देखिनको निम्ति सीमा भन्दा पर जान तयार छ।
डीन हेंडरसन शेफिल्ड शहरमा संगठित जीवन बिताउँछन्, २£k पगाराको despite००,००० डलर भन्दा बढीको worth००,००० डलर भन्दा बढीको मूल्य र .25 १.500,000.०० मीटर बजार मूल्यको बावजुद तर्कहीन खर्चबाट मुक्त जीवन।
सत्य हो, डीन हेंडरसन एक प्रकारको फुटबलर हो जसले व्यावहारिक आवश्यकताहरू समात्छ जुन कि अधिक खर्च हुँदैन। लेख्ने समयमा त्यहाँ कुनै त्यस्तो चीज हुँदैन जुन विदेशी कार, ठूला हवेलीहरू र अन्य चीजहरू सजिलैसँग सजिलैसँग देख्न सकिन्छ जुन फुटबलरहरूले सजिलैसँग देख्न सक्ने छन्। पिचबाट टाढा, डीन हेंडरसनले आफ्नो पैसा आफ्नो प्रेमिकामा खर्च गर्थे।
द्रुत बृद्धि गोलकीपर लेखनको समयमा एक भव्य जीवनशैली बाँच्दैन।
डीन हेंडरसनको पारिवारिक जीवन:
जीवनमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको “परिवार"र"प्रेम“। डीन हेंडरसनका परिवारका सदस्यहरू लाग्छ उनीहरूसँग सबै छ जब तिनीहरूसँग एक अर्काको छेउमा हुन्छन्। यहाँ, तिनीहरू चित्रको रूपमा छन् मा एक शानदार पारिवारिक क्षण छ जेस्ट हार्बरसाइड, लोकप्रिय आधुनिक ब्रिटिश स्थल ह्वाइटहेभन, युनाइटेड किंगडममा अवस्थित छ।
डीन हेंडरसन पारिवारिक जीवन। यहाँ, उहाँ आफ्नो आमा, बुबा र भाइहरू संग चित्रित छ।
यस मनमोहक अनुभागमा, हामी तपाईंलाई डीन हेंडरसनका आमाबुवा र उनका परिवारका बाँकी सदस्यहरूबारे थप तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौं।
डीन हेंडरसनको बुबाको बारेमा:
स्टारडम जाने सडक यति मनमोहक हुने थिएन किनकि उसको सुपर बुबाको मद्दत बिना यो छ। इ England्ल्यान्ड गोलकीपर कहिले पनि यो प्रयोग गर्न असफल हुन्छ फादर्स डे उत्सव आफ्नो बुबालाई सम्झन जो उनी आफ्नो नम्बर एक प्रशंसक भएको दाबी गर्छन्। तल चित्रण गरिएको छ डीन हेन्डरसनको बुबा उसको ठूलो भाइसँगै (Calum)।
डीन हेंडरसनका बुवासँग भेट्नुहोस् आफु र उसको ठूलो भाई (Calum) सँगै चित्रित।
बारेमा डेन हेन्डसनसनआमा:
सुरूबाट, उनी लेखनको समयमा .२ बर्षको उमेरमा (अप्रिल १, २०२०)। डीन हेन्डरसनकी आमा आफ्नो छोराको राम्रो नैतिकताका लागि जिम्मेवार छन् दुवै र दुवै तिर रञ्चले, जीवनमा उनको दृष्टिकोणलाई असर गरेको एक यस्तो उपलब्धि। तल चित्रमा डीनको आमा हुनुहुन्छ जुन उनको उमेर भन्दा कम देखिन्छ।
डीन हेंडरसनको आमालाई भेट्नुहोस्- के उनी आफ्नो उमेर भन्दा कान्छी देखिदैनन्?
डीन हेंडरसनका अभिभावकको नाम लेख्दा अज्ञात छ।
बारेमा डेन हेन्डसनसनभाइहरु:
बढ्दो अंग्रेजी गोलकीपरका दुई बहिनीहरू छैनन् तर दुई भाईहरू छन्; एक एल्डर जो Calum नाम र एक कान्छी, Kyle ले जान्छन्। Calum भन्दा फरक, काइल हेंडरसन एक अत्यन्त निजी जीवन बिताउँछ।
अधिक, Calum डीन भन्दा लामो अग्लो छ जसले height ′ (फिट) २ ″ (इन्च) उचाई मापन गर्दछ। उसको क्यालम हेंडरसनको इन्स्टाग्राम खातामा एक झलकले उहाँ विवाहित भएको तथ्यलाई प्रकट गर्दछ र तिनका शौकहरू गोल्फिंग र स्केटिंग भएको हुनसक्दछ।
बारेमा डेन हेन्डसनसननातेदारहरु:
निस्सन्देह, उनका काका (हरू), काकी (हरू) र हजुरबा हजुरआमा (जीवित छ भने) पक्कै पनि अंग्रेजी फुटबल मामिलाको कवचमा उनीहरूको आफ्नै भएकोले फाइदा उठाउँछन्। लेख्ने समयमा जस्तै, तिनीहरूमा कुनै कागजातहरू वेबमा अवस्थित छैन। अवश्य पनि, हामी तपाईंलाई अपडेट गर्नेछौं जब हामी केहि निरीक्षण गर्दछौं।
डेन हेन्डसनसन अनटोल्ड तथ्यहरू:
डीन हेंडरसनको जीवनीको यस अन्तिम खण्डमा हामी तपाईंलाई केही अनकही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्नेछौं।
तथ्य # १: उहाँ वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर हुनुहुन्छ:
डीन हेंडरसन एक गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर हो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उनले keeper .49.51 ..XNUMX१ सेकेन्डको लागि गरेका 'गोलकिपरको रूपमा पोशाकको सबैभन्दा छिटो समय' को लागी गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड बनाए। यो त्यहाँ रोकिदैन। डीनसँग पनि उनले 'एकै मिनेटमा गरेको' सबैभन्दा फुटबल (फुटबल) हेड पासहरू 'को लागि गिनीज वर्ल्ड रेकर्ड राख्यो। यी रेकर्डहरू डीन हेंडरसनको जीवनीको एक महत्त्वपूर्ण भाग गठन गर्दछ।
तथ्य # १: प्रारम्भिक तलब ब्रेकडाउन:
जबदेखि उनले लाइमलाइटमा प्रवेश गरे, केही जिज्ञासु प्रशंसकहरूले डीन हेन्डरसनका तथ्यहरूमा चिन्तन गर्न थालेका छन्, जस्तै कि उनले शेफील्ड युनाइटेडसँग आफ्नो क्यारियर शुरू गर्दा कति कमाए।
जून १ 18, २०१ 2018 मा, डीन हेन्डरसनले शेफिल्ड युनाइटेडसँग एक सम्झौतामा छाप लगाए, जसलाई उनले वरिपरि तलब ठूलो तलब दिइरहेका देखे। £ 520,000 प्रति वर्ष। थोरै संख्यामा उसको तलब (२०१ smaller तथ्या ;्कहरू) तोड्दै हामीसँग निम्न छ;
पौंड स्टर्लिling (£) मा उनको आय
के उसले प्रति वर्ष कमाउँछ £ 520,000 $ 625,604 € 570,168
के उसले प्रति महिना कमाउँछ £ 43,333 $ 52,133.68 € 47,513
के उसले प्रति हप्ता कमाउँछ £ 10,833 $ 13,033.4 € 11,878
के उसले प्रति दिन कमाउँछ £ 1,547.6 $ 1,861.92 € 1,696.9
के उसले प्रति घण्टा कमाउँछ £ 64.49 $ 77.58 € 70.7
के उसले प्रति मिनेट कमाउँछ £ 1.08 $ 1.29 € 1.18
के उसले प्रति सेकेन्ड कमाउँछ £ 0.02 $ 0.02 € 0.02
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो डेन हेन्डसनसनबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… इ England्ल्यान्डमा औसत मानिस जो कुल जित्छ £ 2,340 कम्तिमा एक महिना काम गर्नु आवश्यक पर्दछ 1.5 वर्ष कमाउन £ 43,333 जुन रकम डीन हेंडरसनले १ महिनामा एक पटक कमाएको हो।
तथ्य # १: डीन हेंडरसनको धर्म:
नाम "डीन" एक ईसाई केटाको नाम हो र यो अंग्रेजीको नाम पनि हो जसको धेरै अर्थहरू छन्। यस हदसम्म, यो अनुमान गर्न उचित छ कि डीन हेंडरसनसम्भवतः आमा बुबाआमाले आफ्नो छोरालाई इसाई धार्मिक मान्यता अनुरुप हुर्काएको हुनसक्छ। यद्यपि हाम्रो व्यक्तिगत धारणा उसको इसाई भएको अनुरुप भए पनि विश्‍वासको मामिलामा हन्डरसनको धारणा कम छ।
तथ्य # १: उनले संयुक्त रेकर्ड राखेका छन्।
म्यानचेस्टर युनाइटेडले आफ्नो प्रतिष्ठानबाट आफ्नो स्थापित गोलकीपर उत्पादन गर्न सक्षम भएको 40० बर्ष भन्दा बढी भएको छ। के तपाईंलाई थाहा थियो?… डीन हेन्डरसनले १ 1978 .XNUMX मा ग्यारी बेली पछि पहिलो र सबैभन्दा मनमोहक घरेलु गोलकीपर हुने कीर्तिमान राखेका छन्।
उसको साथ, Man० बर्षमा पहिलो पटक म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई गोलकीपरहरूको खोजीमा ट्रान्सफर बजारमा उद्यमको आवश्यकता पर्दैन, जस्तो कि उनीहरूले विगतमा गरेका थिए।
तथ्य # १: फिफा गेम प्रेमीहरूको लागि मनपर्दो विकल्प:
यदि तपाईं फिफा क्यारियर मोड प्रेमी हुनुहुन्छ भने, कृपया डीन हेन्डरसन खरीद गर्न राम्रो गर्नुहोस्। उहाँ सँगसँगै Gianluigi Donnarumma FIFA मा एक राम्रो गोलकीपर बन्ने सम्भावना छ।
अ Go्ग्रेजी गोलकीपर भविष्यको लागि एक मान्छे हो। क्रेडिट: SoFIFA
वास्तवमा #:: डीन हेंडरसन र जोर्डन हेंडरसन ब्रदर्स हुन्:
डीन हेंडरसनको प्रीमियर लिग दृश्यमा वृद्धि भएपछि केही प्रशंसकहरू इन्टरनेटमा सोध्न आए कि उनी लिभरपुलका कप्तान, जोर्डन हेंडरसनसँग सम्बन्धित छ कि भनेर। सत्य यो हो कि डीन र जोर्डन हेंडरसन कुनै पनि हिसाबमा सम्बन्धित छैनन् यद्यपि उनीहरूले समान थर साझा गर्छन्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो डीन हेंडरसन बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्क पढ्नु भएकोमा धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
डीन हेंडरसन जीवनी (विकी ईन्क्वायरीज)
पुरा नाम: डीन ब्राडली हेंडरसन।
जन्म मिति: १२ मार्च १ 12 1997 ((उमेर २ 23 अप्रिल २०२० मा)
अभिभावक: श्री र श्रीमती हेंडरसन।
परिवार गृह: व्हाइटहेवन, इ England्ल्यान्ड।
Siblings: क्यालम हेन्डरसन (जेठो भाई) र काइल हेंडरसन (कान्छो भाई)।
उचाइ: F फिट २ मा (१.6 मीटर)
फुटबल शिक्षा: कार्लिसिले युनाइटेड (२००–-२०११) र म्यानचेस्टर युनाइटेड (२०१––२०१।)।
कुल मूल्य: £ 520,000 देखि million 1 मिलियन
वेतन: प्रति हप्ता ,25,000 २ .,००० (मार्च २०२० मा)।